Nagu saabsan - Shijiazhuang Fanshen Trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Fanshen Trade Co., Ltd.oo la aasaasay 2002, oo hore loo yiqiin aqoon isweydaarsi gacmeed, gacmo gacmeed kala duwan oo ka mid ah maqaarka adhiga iyo galoofyada maqaarka, koofiyadaha iyo agabka kale ee ganacsatada caalamiga ah Tan iyo 2012, Waxaan u beddeleynaa ganacsigeenna qaabeynta iyo u iibinta macaamiisha shisheeye. Waxaa lagu maalgaliyay warshad soosaarka maqaarka iyo dhogorta ee magaalada Gucheng, Gobolka Hebei.
Falsafadda naqshadeynta ee "fudeyd & xarrago", Shirkadeena waxay soo saartay galoofyo maqaar adhi ah oo kala duwan, galoofyada adhiga, koofiyadaha, dhegaha iyo waxyaabaha kale. Alaabada loo dhoofiyo Galbeedka Yurub, Mareykanka, Kanada, Ruushka, Jabbaan, iwm. Gaar ahaan, Qaabka fudud, shaqada fiican, iyo maqaar gacmeedka lagu soo dhoweeyay ayaa waxaa soo dhoweeyay ajaanibta si fiican ciribta u iibsada. Isla mar ahaantaana, kooxdeena naqshadeynta waxay urursadeen hodantinimo khibrad naqshadeyn ah.
Tan iyo aasaaskii, Shirkadeena had iyo jeer waxay qaadataa daacad, guul-guul ujeeddooyin ganacsi, u hoggaansamaan dhaqamada ganacsiga caalamiga ah, u hoggaansamaan xeerarka ganacsiga caalamiga ah, dhisaan nidaam adag oo QC ah iyo nidaam adeeg oo kaamil ah. Hadda waxaan la samaynay iskaashi xasiloon oo muddo dheer soconaya oo lala yeesho ganacsatada iyo dukaamada tafaariiqleyda iyo kuwa shisheeye.
Waxaan sidoo kale leenahay koox gacmeed gacmeed gacmeedyo ah, Dhammaan galoofyadayada maqaar gacmeedyada waxaa lagu tolay farsamo dhaqameed tolmo tolmo ahaan. Waana in ay ku dhammaystiraan xirfadlayaal xirfadlayaal ah oo leh in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah, iyo sidoo kale kaliya maqaar ama galoofyo adhi. waxaan haynaa koox sidan oo kale ah!
Waxaan ula dhaqannaa macaamiisheenna sida ay macaamiisha u jecel yihiin in loola macaamilo, adeeg shaqsiyeed, is-weydaarsi dhib-yar oo fudud iyo soo-celin, waxaanan keliya soo bandhignaa alaab u oggolaaneysa macaamiisha inay ku qancaan.
Ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto, Waxaan ku dadaali doonnaa sidii aan u caawin lahayn.